फ्राइ चिकेन र माछा धेरै खाने गर्नुभएकाे छ ? हाेसियार ! - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
प्रकाशित मिति: ११ माघ २०७५, शुक्रबार January 25, 2019
एजेन्सी । फ्राइ गरिएको चिकेनको मासु सेवन गर्नु स्वास्थ्यका लागि निकै हानीकारक रहेको नयाँ अनुसन्धानले देखाएको छ । अमेरिकामा गरिएको एक अध्ययनले दैनिक ‘फ्राइड चिकेन’ खाने महिलामा १३ प्रतिशत मृत्यु जोखिम हुने देखाएको छ। फ्राइ गरिएको चिकेन र माछा दैनिक सेवन गर्नाले क्यान्सरको जोखिम बढ्ने मात्रै नभै मृत्युको जोखिम पनि बढिरहेको अनुसन्धानले देखाएको हो ।
बुधबार मेडिकल जर्नल बिएमजेमा प्रकाशित अध्ययनका अनुसार दैनिक फ्राइ चिकेन खानाले महिलामा १३ प्रतिशत मृत्युको जोखिम बढाउँने र १२ प्रतिशत मुटु रोगको जोखिम थपिने पाइएको छ। त्यसैगरी फ्राइ माछाले ७ प्रतिशत मृत्युको जोखिम र १३ प्रतिशत मुटुको जोखिम बढाउँने पाइएको छ ।
अध्ययन ५० देखि ७९ उमेर समूहका १ लाख ७ हजार महिलामा गरिएको थियो। अध्ययनकर्ताले सन् १९९३ देखि १९९८ मा खुलेका ४० स्वास्थ्य क्लिनिकमा अध्ययन गरेका थिए। १८ वर्षसम्म गरिएको उक्त अध्ययनले चिल्लो खानेकुराले महिला स्वास्थ्यमा ठूलो नोक्सानी पुर्‍याउने निष्कर्ष निकालेको छ।
चितवनमा बाढीले बगाएर एक महिलाको मृत्यु, सयौं घर डुबानमा
असर ३० ।चितवन, अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले बगाएर चितवनमा एक महिलाको मृत्‍यु भएको छ । माडीको बाँदरमुढे […]
“खल्ला जमिन”सार्बजनिक प्रियंका कार्की तथा अभिनेता पुष्प खड्काको अभिनय।
महेश्वर शर्मा सिड्नी अष्ट्रेलिया दिपक निरौलाको "खुल्ला जमिन" सार्बजनिक भएको छ।प्रवासमा रहेर […]
उद्योगपति अडानीको कोइलाखानीको इजाजत खारेज
अष्ट्रेलिया, अष्ट्रेलियाको एक अदालतले भारतीय उद्योगपति गौतम अडानीको कोइलाखानी सञ्चालनको इजाजत खारेज गरिदिएको […]
निर्मला हत्या काण्ड : पक्राउ परेका रावलले स्वीकारे हत्या, आइजीपीको अगाडि यसरी खोले मुख
काठमाडौं । झण्डै चार महिनादेखि सिङ्गो प्रहरी संगठन र सरकारको टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको बलात्कारपछि हत्या […]
धेरै बोल्नेभन्दा पनि यो काम गर्ने बेला हो : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ, ५ भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सरकारले प्रक्रिया अगाडि […]